राजश्व संकलन – Himalaya Television
अर्थ मन्त्रालयले दियो राजश्व संकलनको लक्ष्य, पूरा होला लक्ष्य ?
७ साउन, २०७७ काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागलाई राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य दिएको छ । मन्त्रालयले राजस्व उठाउने जिम्मेवारी पाएका दुबै निकायलाई ८ खर्ब ९० करोडको वार्षिक लक्ष्य दिएको हो । मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व...
लकडाउनपछि सुस्त भएको अन्तरिक राजश्व संकलन उत्साहजनक
२४ असार, २०७७ काठमाडौं । आन्तरिकतर्फ कर संकलनमा समस्या भोगिरहेको सरकारलाई राहत पुग्नेगरी कर संकलन हुन थालेको छ । एक असारपछि सरकारले लकडाउन केही खुकुलो पारेसँगै राजश्व संकलन हुने क्रम बढेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २२ असारसम्म...
३२ जेठ, २०७७ काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिले मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेको अवस्थामा भन्सारबाट १५ अर्ब र आन्तरिक राजस्वबाट केही अर्ब मात्रै संकलन हुने गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले...